Augustine Mahiga oo cambaareeyey weerarkii lagu dilay wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga ee Somaliya, tacsina u diray eheladiisa. – Radio Daljir
Augustine Mahiga oo cambaareeyey weerarkii lagu dilay wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga ee Somaliya, tacsina u diray eheladiisa.
Nairobi, 11 June 2010 ? warsaxaafadeed uu ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan Somalia , Dr Augustine Philip Mahiga kasoo saaray magaalada Nairobi ayaa lagu canbaareeyey weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay wasiirkii arimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowlada Somalia C/shakuur Sheikh Xasan Faarax Denjire Mahiga ayaa tilmaamay in uu aad uga naxay weerarkaasi naraxariisdarada ah ee lagu dilay wasiirkii daakhiliga iyo amniga qaranka ee Somalia.
Waxana uu tacsi tiiraanyo leh u diray eheladii iyo dowlada Somalia ee uu ka geeriyooday C/shakuur Sheikh Xasan faarax isagoo u rajeeyey cidkasta oo ku dhaawacantay weerarkaasi iney kasoo kabtaan ? weerakaan waa in la canbaareeyaa waxana ka dameeyey kuwo doonayey in Somalia dib uga noqota wadada nabada iyo amaanka ? ayuu Yiri denjire Augustine Philip Mahiga waxana uu intaa raaciyey ?kooxda yar ee qaswadayaasha ah ee fuliyey weerarkaasi waa in aan loo ogolaan in ay sii wadaan weerarada noocaas oo kale ah ee ay ku waxyeeleynayaan
geedi socodka nabada ee somalia?.
Wasiirkii arimaha gudaha iyo amniga ee Somalia ayaa shalay gelinkii dame lagu qarxiyey isagoo ku sugan gurigiisa magaalada Muqdisho waxana qaraasi fulisay gabar uu adeer u yahay ee muddo gurigiisa ku noolayd, Waxaana weerarkaasi sheegtay ururka Al-shabaab. Maanta ayaa lagu aasaasay magaalada Muqdisho.